Ukuvakasha Nezokungcebeleka Franchise - Izivakashi Zokuvakasha | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Ukuvakasha nokungcebeleka Franchise
Okufakiwe Okuhamba Ngezokuvakasha Nezokungcebeleka
Ukuhamba kwakamuva nokuzijabulisa kweFrance
Ukuvakasha nokuzilibazisa Franchise
Ngomkhakha wezokuvakasha ukhula ngokushesha emhlabeni wonke, kanye nezokuvakasha zisiza umnotho uthuthuke, kungani ungabeki imali ethubeni lokuvakasha nokuzilibazisa? Kungakho namhlanje sizoklelisa ezinye izibalo ezizungeze umkhakha wokuvakasha nokungcebeleka ukuze unikeze noma ngubani ocabanga ukutshala ukuqonda okuncane emkhakheni okhula ngokushesha.
Izibalo ezizungeze imboni yezokuvakasha nezokungcebeleka
Manje sizoklelisa ezinye izibalo ezizungeze umkhakha wokuvakasha nokungcebeleka. Ngakho-ke noma ngubani ofuna ukutshala imali angathola umuzwa ophelele wohlobo lwamakhasimende abangakwazi ukulufinyelela lapho betshala imali kwelinye lala mathuba e-franchise ajabulisayo. Ezinye zalezi zibalo zingakumangaza ukuthi likhulu kangakanani imboni yezokuvakasha nokungcebeleka nokuthi lisiza kangakanani umnotho wethu minyaka yonke.
Kusukela ngo-2010 imboni yezokuvakasha ibingumkhakha okhula ngokushesha kakhulu.
IBrithani inesibikezelo sokuba nomkhakha wezokuvakasha obiza u- $ 257 billion ngo-2025.
Emhlabeni jikelele, ukufika kwe-1.8bn kwabavakashi ngonyaka we-2018
Izindleko zokuhamba emhlabeni jikelele ze-4.5bn ngonyaka we-2018.
Ezokuvakasha eziphakathi nendawo zimiselwe ukukhula ngo- $ 21 billion ngo-2013 ziye ku- $ 57 wezigidigidi ngo-2025.
Umkhakha wezokuvakasha uhlinzeka ngezigidi zemisebenzi emhlabeni wonke.
Zibonisani lezi zibalo kumkhakha wezohambo nezokuNgcebeleka?
Lezi zibalo zikhombisa ukuthi umkhakha wokuhamba nezokungcebeleka uyakhula minyaka yonke futhi lezi zibalo zikhombisa futhi uhlobo lwesisekelo samakhasimende nokusebenzisa kwakho uthola kumangalisa ngempela. Futhi umkhakha wokuhamba nezokungcebeleka muhle kakhulu ekusizeni abantu abasebenza ngokwejwayelekile abahlinzeka ngezigidi zamathuba emisebenzi unyaka ngamunye emhlabeni wonke. Ngiyathemba-ke ukuthi lezi zibalo zikukhuthaze kakhulu ukuthi uqale ungumnikazi wokuhamba nokuzilibazisa ube umphathi wakho.
Thola i-franchise yakho yokuhamba ekahle eFranchisee.